NGO Forum - Nepal - मुहान सुकेपछि गाउँ सुनसान NGO Forum - Nepal - मुहान सुकेपछि गाउँ सुनसान
मुहान सुकेपछि गाउँ सुनसान
बाँसपानी : पानीका मुहान एकपछि अर्को गर्दै सुकेपछि गाउँ छोडेका दुइ दर्जन परिवार अझै फर्केका छैनन् । दसैको मुखमा पनि ओख्रे ५ को बाँसपानी ६ महिनादेखि गाउँ सुनसान बनेको छ ।
जिल्लाकै सुख्खाग्रस्त यो गाउँका पानीको मुहान सुकेर पिउने पानीको समेत हाहाकार भएपछि पानी खोज्दै धेरै गाउँले तराई झरेको स्थानीयवासी टिकाराम बस्नेतले बताए । 'पानी नै खान नपाएपछि को गाउँमा फर्किन्छ र ?' उनले भने, 'भएका पनि त्यत्तिकै समस्या छन् ।' पाँच वर्षअघिसम्म यहाँका खोल्साखेल्सीमा रहेका पानीका मुहान सबै एकपछि अर्को गर्दै सुकेको उनले बताए । यो वर्षभने यहाँका पानीका स्रोत सबै सुके । गाउँमा पिउने पानी पनि पाइँदैन । पानीकै कारण यो वर्षात्र हरिमाया न्यौपाने, खडगबहादुर न्यौपाने, खगेन्द्र न्यौपाने, नगेन्द्र कार्की र पुण्य न्यौपानेको परिवार पूर्वी तराई झरेको स्थानीय रन्नदेवी प्राविका प्रधानाध्यापक केदार बस्नेतले बताए ।
'अरु दुइ दर्जन परिवार बर्साई जाने तयारीमा छन्' उनले भने 'पाँच वर्षे अवधिमा गाउँ नै खाली हुन अँटयो ।' एकपछि अर्को गर्दै गाउँ छोडेर गएपछि बाँकी रहेका पनि यसपटकको दसै त्यति रमाइलो नहुने भो भन्न थालेका छन् । अघिल्लो वर्षा गाउँमा बाटोघाटो खन्ने, पिङ हाल्ने, नाचगान गर्ने लगायतका क मगर्ने युवा र गाउँले सवैजसोले गाउँ छोडे । अब अघिल्लो वर्षजस्तो रमाइलो हुँदैन होला ? प्रअ बस्नेतले बताए । गाउँमा अन्यत्रबाट ल्याउने पानीको स्रोत पनि नभएको र भएको मुहान, पोखरी, खोलानाला तथा चिस्यान र सिमसार क्षेत्र समेत सुकेपछि प्रत्येक परिवार यहाँबाट जति सक्यो छिटो हिडन हतार छन् । पाँच वर्षघि सम्म ८३ घर रहेको यहाँ अहिले आधाआधी मात्र छ ।
वारिपारीका गाउँमा परदेश गएका र काम विशेषले घरबाहिर रहेका धमाधम फर्किरहेका छन तर यहाँ भने पानीको अभावमा दसैको मुखैमा पनि जग्गाजमीन त्यसै छाडेर तर्रार्य झर्दै छन् । वर्षायाममा पर्याप्त मात्रामा वर्षासमेत नुहँदा यस क्षेत्रमा अन्न उत्पादनसमेत राम्रो भएको छैन । पानी नपरेकै कारण गअउँलेका खेतवारी बाँझै रहेकावे स्थानीय जगतबहादुर घोसार्नेले बताए । यो वर्षात्र केरापानी, देवीथान, ठोकेर खोला लगायतबाट आधा दर्जन बढी पानीका मुहान एकैपटक सुके । अहिले एक गाग्री पानी ल्याउन एक घन्टा टाढाको अँधेरी खोलामा जाने गर्छन । 'जाँदा एक घन्टा लाग्छ' प्रअ बस्नेतले भने 'पानी बोकेर आउँदा दुइ घन्टा समय वित्छ ।' पाँच वर्ष अघिसम्म धान फल्ने यहाँका खेतमा अहिले किर्ने काँडाले ढाकेको छ । यहाँका ५ हजारभन्दा बढी रापनी खेत बाँझै रहेको गाउँलेले बताए ।
स्रोत : कान्तिपु दैनिक, ०६७ असोज १७, पेज नं. ११